Matahotra ny hohadinoina ireo mponina ao amin’ny faritra Japoney niharan’ny rivo-doza · Global Voices teny Malagasy
Mifantoka ao Tokyo fotsiny ny ankamaroan'ny tatitra fandalovan'i Faxai
Voadika ny 16 Septambra 2019 7:55 GMT
Hoy ny vakin'ny teny: Tanànan'i Tateyama, Prefektioran'i Chiba; tokantrano 900.000 no tapaka jiro taorian'ny rivo-doza mahery vaika. Simba ny fotodrafitrasa, nianjera ireo andry; nanampy trano maherin'ny 100 ireo mpirotsaka an-tsehatra voalohany, ka 10 farafahakeliny no nalefa tany amin'ny hopitaly ao Tateyama. Sary: Fantsona YouTuben'ny ANN News (pikantsary).
Mihevitra ireo mponina ao amin'ny vondrom-piarahamonina miorina ao ivelan'i Tokyo fa tsy raharahian'ny fampahalalam-baovao nasionaly ny fahavoazana nateraky ny rivo-doza goavana.
Rehefa avy namely ny vondrom-piarahamonina nosy Japoney tany atsimon'i Tokyo, nandalo ny faritany tao Chiba City ny rivo-doza Faxai tamin'ny Alatsinainy 9 Septambra tamin'ny 5 maraina, ora eo an-toerana. Nitondra oram-be sy rivotra teo amin'ny180 sy 200 km/ora, mitovy amin'ny rivodozan'i Atlantika sokajy 4 ny rivo-doza.
Talohan'ny nahatongavany tao Chiba City, raha nifindra tany avaratry ny helodranon'i Tokyo, nitondra rivotra goavana sy oram-be mivatravatra tany Minami Boso, vondrom-piarahamonina somary mitoka-monina any amin'ny farany atsimon'ny saikinosy be tendrombohitra Boso ao amin'ny Prefektioran'i Chiba ny rivo-doza, ka anisan'izany i Tateyama sy Minami Boso.
Namono olona 3 farafahakeliny tao Kanto, faritra misy mponina 36 tapitrisa ahitana an'i Tokyo sy ny prefektiora hafa ny rivo-doza. Ny ankamaroan'ny fitantaram-baovao momba ny rivo-doza kosa nifantoka tamin'ny hoe mpandeha 10.000 farafahakeliny no tafahitsoka nandritra ny 24 ora tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Narita rehefa tapaka ny lalana sy ny lalamby mampitohy amin'i Tokyo afovoan-tanàna.
Efa ho 400.000 ny tokantrano manerana ny faritr'i Kanto tapaka jiro, miaraka amin'i Tepco, fampiasa amin'ny herinaratra, tombanana haharitra hatramin'ny zoma 13 septambra izao vao mety hiverina ny jiro, efa ho herinandro iray taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza. Miteraka tahotra lehibe eo amin'ny fahasalaman'ny olombelona ny fahatapahan-jiro miely patrana sy maharitra, ​​tsy noho ny tsy fandehanan'ny vata fampangatsiahana any amin'ny tsenambarotra ihany, fa raha tsy misy fitaovana fifehezana hafanana (climatisation ), dia tsy hitsahatra ny hafanana goavana. Tamin'ny herinandro lasa teo, tafakatra 40 degre Celsius ny mari-pana tany amin'ny toerana sasany.
Mahatsapa ireo mponina sasany ao amin'ny Saikinosy Boso atsimon'ny Prefektioran'i Chiba fa tsy noraharahiana tanteraka sy adino taorian'ny fandalovan'ny tadio goavana ny faritra misy azy ireo.
Ny alarobia 11 septambra, nanamarika ny Finders, tranonkalam-baovao sy fampahalalam-baovao tsy miankina ao Tokyo hoe:
Nisy fahasimbana lehibe nitranga tany amin'ny faritra atsimon'ny Prefektioran'i Chiba, ary maro ny olona mbola mijaly amin'ny fahatapahan'ny herinaratra sy ny fahatapahan'ny rano. Manao fikarohana ao amin'ny aterineto na tranonkala tambajotra sosialy aho mba hijery izay zava-mitranga na ny fomba ahafahako manampy, tsy mahita afa-tsy vaovao kely fotsiny aho ary tsy misy sary feno (momba ny fiantraikan'ny rivo-doza tany amin'ny atsimon'i Chiba), izay mahatonga ahy hahatsiaro ho sahiran-tsaina sy sorena.
Mampiseho sary misy ny fahasimbana miely patrana nateraky ny rivo-doza tao Tateyama, any atsimon'i Chiba ny lahatsoratra bilaogy.
Nanangona sary misy ny fahapotehana tany amin'ny faritra atsimon'ny prefektiora Chiba ny lahatsoratra iray hafa, navoaka tao amin'ny tranonkala fibilaogina Naver Matome sy niparitaka be tao amin'ny media sosialy, ary manome fijery feno kokoa momba ny manjo ireo mponina eo an-toerana.
Ny sasany tamin'ireo sioka nangonina tao amin'ny lahatsoratra bilaogy kosa nitaraina noho ny tsy fisian'ny fijerena ny fahavoazana nateraky ny rivo-doza tany Minami Boso sy ireo vondrom-piarahamonina hafa ao. Tobigeri, tranonkala mifototra amin'ny baolina fandaka ao Minami Boso, any amin'ny farany atsimon'i Chiba,nanamarika hoe:
Rava tamin'ny rivo-doza Faxai i Minami Boso, toerana any tobigeri (sic). Na izany aza, manontany tena izahay hoe maninona no tsy dia misy tatitra mihitsy momba ny faharavana tamin'ny media. Loza mahatsiravina izany. Tiako ho fantatry ny rehetra ny zava-misy ankehitriny ao Minami Boso.
Niharan'ny rivo-doza ihany koa i Kamogawa, tanàna iray hafa ao amin'ny faritra atsimon'ny prefektora Chiba. Mpisera twitter iray no nizara ny faharavana iray andro taorian'ny tafiotra mahery vaika, ary nozaraina efa an'aliny ilay sioka:
Tahaka izao ny zava-misy any Kamogawa … Miverina tsikelikely amin'ny laoniny ny herinaratra. Azafady zarao ity ary aparitaho.
Tamin'ny alarobia 11 septambra, roa andro taorian'ny tafio-drivotra, mbola nikatona ireo fivarotana any atsimon'i Chiba ary misy ireo mbola tapaka jiro:
Izao no zava-misy any amin'ny fivarotana any Tateyama. Banga ireo talantalana!
Miezaka mitady fanampiana ho an'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo voakasika ny mponina any an-toerana. Manao antso hisian'ny fanomezana ny pejy Facebook Minami Boso:
Ampio azafady ny faritra Tateyama sy Minami Boso ao amin'ny prefektiora Chiba. Ravan'ny rivo-doza izahay, ary ampahany kely amin'ny faharavana ihany no aseho eto – mbola ratsy kokoa any amin'ny faritra sasany. Betsaka ny faritra izay tapaka jiro, tsy misy rano, ary tsy misy telefaona na aterineto. Tsy misy ny herinaratra, maizina, tsy misy na inona na inona any amin'ny toeram-pivarotana, tsy mandeha ny tobin-tsolika ary tsy mandeha koa ny vata fampangatsiahana sy ny fitaovana fifehezana hafanana. Nandritra ny 3 andro hatramin'izao izany taorian'ny rivo-doza. Misy ny fanakatonana ny arabe, nirodana ny tranobe, miakatra ny hafanana, misy ny tsy fahampian-tsakafo, ny tsy fahampian'ny olona, ny ​​tsy fahampian-tsolika. Ampio izahay azafady.
Mampifandray amin'ny pejy tranonkala (furusato nozei) “hometown tax donation” [toeran'ny hetran'ny fanomezana] ny lahatsoratra ao amin'ny Facebook, izay ankoatra ny fitantarana ny fahavoazana sasany nateraky ny rivo-doza ao amin'ny faritra, dia manangona sy mizara ireo fanomezana efa nakan-ketra any amin'ireo vondrom-piarahamonina any atsimon'ny prefektioran'i Chiba ihany koa. Niteraka adihevitra tato anatin'ny taona vitsivitsy ny momba ny hetram-panomezana tao an-tanindrazana, saingy niteraka famatsiam-bola goavana ho an'ireo faritra hafa niharan'ny loza tao Japana.
Azo jerena ao amin'ny Naver Matome ny sary marobe misy ny fahasimbana nateraky ny rivo-doza. Azo arahana ny fivoaran'ny ezaka famonjena momba ny rivo-doza amin'ny fampiasana ny tenirohy #南房総 (Minami Boso City).